Ukuhlaziywa kweemodeli eziphathekayo kumxholo wokudlala: "Uphawu" oluvela kuMarc Jacobs, "iCasino" evela kwiNIKA, "Bubble" esuka eKorum, "iSttona Poker" yaseRolex
Ibond ijonge iLunja njengowesifazane omele ukuba athathwe ngokunyanisekileyo, okanye awuqonde kakuhle, kodwa akaze ahambe ngendlela yakhe. Ian Fleming, iCasino Royale
Umfanekiso womntu weshishini awuyona isandi nje. Iidandi zedolophu zanamhlanje, kubalinganiswa obunokumangalisa ngokuzithemba, injongo, ukuguquguquka kunye nokuzonwabisa, abakwaziyo ukukhetha ngokufanelekileyo ukugqoka iimpahla kunye nezicathulo. Ziyakwazi ukugcina iso elithe tye kwiimfashini zakutshanje nakwiimveliso.
I-Classic inomsebenzi onzima
Iilindi zokujonga imeko ziyingxenye ebalulekileyo yomfanekiso womntu ongesabi ukubeka imiceli-mngeni, imisebenzi enomdla aze awenze ngokugqithiseleyo. Izixhobo eziseStlish zilungelelene nomfanekiso womntu onokuzithemba ngokutsha ngokuphakamisa iindawo eziphakamileyo kwishishini nakwizombusazwe, kunye nakwezinye iindawo zobomi. Umxholo womdlalo, owawuthandwa yimpawu ezininzi ezidumileyo emhlabeni, kuphela ugxininisa oku. Iimodeli zokulinda kunye neempawu zokugembula zibonisa ngokucacileyo: umntu wanamhlanje uyazi indlela yokubeka umngcipheko kwaye enze izigqibo ezifanelekileyo, uthatha ubuninzi ebomini kwaye uhlala kwindawo ephakamileyo emphakathini.
Ukuqokelela "iSimboli" sikaMarc Jacobs
Ukuqokelela kweenkronometers kwi-brand yaseMelika uMarc Jacobs inomlindo oyingqayizivele, owenziwe kwintsebenzo engeyonto. Lo mbonakalo obalaseleyo, umgangatho ophezulu wendibano, indlela echanekileyo. Nangona kunjalo, inkalo yomlindo yinto ekhethekileyo yodibaniso lwefom ye-classical, eqinileyo, iincwadana ezicacileyo kunye neenjongo zentando yesininzi. Umqambi oyingqungquthela unikezela ngamadoda afanelekileyo, amadoda anxubileyo afana nokuhlanganiswa kwamandla kunye nokuphakama, umzekelo apho ukudayela kungenazo iinombolo zesi-Arabhu okanye zamaRoma.
Isici esikhethekileyo sokuqokelela "iSimboli" imidwebo eyahlukileyo. Ngokungaqinisekiyo ngesibindi, ngesibindi, ngokukhawuleza nangenxungukisayo, imifanekiso yeempahla zekhadi ibonakala kunye nabalingiswa bekhathuni. Iqoqo elinjalo lizalisa isigxina somntu onqwenela ukuba wonke umntu amthande, uthanda umngcipheko kunye nokuzimela.
Ukuqokelela "iCasino" ilindi evela kwiNIKA
Imveliso yokubukela yaseRussia i-NIKA ibonise ukuchazwa kwayo kwezixhobo ezenziwe kwimidlalo yokudlala kwi-court of connoisseurs of fashion trends. Uchungechunge olukhethekileyo lwe "Casino" luya kuvumela amadoda ukuba anikeze umfanekiso wabo ngokubukela okungaqhelekanga kwamehlo amancinci. Le mizekelo yenziwe ngokukodwa kulabo abaqhubela phambili imihla ngemihla, ukuvula ii-horizons ezintsha, abayiki ukubeka ingozi nokuzama.
Ukusuka kwi-NIKI yonke into, yonke imivimbo, yonke into ecinga ngayo. Kule mizekelo, akukho nto iphosakeleyo. Iqoqo elincinci liyakuthi libonwe ngabo bahamba ebomini ngokukhawuleza, ngokukhawuleza, ngesibindi. I-accessory igxininisa ubuqhetseba kunye namandla abo madoda, owenza imihla ngemihla ukuba enze izigqibo ezinzima nezibalulekileyo. Izilwanyana zesiliva "iCasino" zenziwe ngokukodwa kulabo abajwayele ukugcina ukuzola kwangaphandle, ukuba bahlale begcinwe kuyo nayiphi na, nangona ziimeko ezilukhuni nakunobungozi, ukujongana nayo yonke imisebenzi kuphela. Kuloluhlu oluncinci lwamawashi avela kwi-brand yaseRussia i-NIKA, isitayela seklasi ifanelekileyo:
ibhande elithembekileyo nelinamandla;
manani a maRoma;
Yiyo kanye indlela yokubonakalisa i-luxury business ukuba amadoda okwenene azikhethele wona. Nangona kunjalo, ekwenzeni i-chronometer kukho intsimbi ekhethekileyo. Uhlangothi oluphambeneyo lwe-dial lubonisa ukulinganisa i-tape measure. Ukubukwa kwezinto zokugqoka "iCasino" ikuvumela ukuba uhlolisise inhlanhla yakho nanini na. Ngaphantsi kwentloko yokudlulisa kukho iqhosha elikhethekileyo. Ngaba ulungele ukuthandana noNksz Fortuna? Yiya phambili!
Ukuqokelela "uBlue" nguCorum
Ukufumana inhlanhla ngomsila unikezwa ngamanye amajelo awaziwayo. I-Corum ibonise iqoqo engaqhelekanga lamakhronometers amadoda kunye noyilo lwe-hooligan. Umzila osandul 'uphuculo "osandul' uvuseleleka ubonakalisa umgangatho obalulekileyo kunye nokungabikho kwangaphandle. Uchungechunge lomdlalo luya kumelwa ngoyilo kunye nezixhobo ezinjengokubhenela njenge:
Zonke iimpawu zebhanki ziveliswa kwiziqwenga eziyi-88, ezithe zazingqinekanga, ezingezizo ezincinci kwaye kufuneka zikhunjulwe ngabalandeli benqaku.
Kwinqaku! Inani elithi "8" kwezinye iilwimi zesiTshayina livakala njengegama elithi "inhlanhla", elingenakucatshulwa kwifilosofi yabathengisi bezokugembula kunye nobungozi.
Iqoqo le-Daytona Poker nguRolex
Ubutyebi, ukunethezeka, ukuzithemba kusenza sikwazi ukubonisa uphawu lweRolex eyaziwayo emhlabeni. Abaqulunqi be-trademark baye bahlakulela ukuqokelela okukhethiweyo kweenkronometers "i-Daytona Poker", eyongezwa ngumfanekiso wesandla wokuphela. Isongo salolu phiko lwangaphambili lubonisa izinto ezifanelekileyo zekhadi. Akumangalisi ukuba abantu abaphumelelayo, iilindi ezinjalo zibonakalisa udumo, ukugqwesa, isibindi nokuphakama.
Iimpawu eziziwayo ziqonda uthando lokugembula. Ukubeka ingozi, ukwenza izigqibo, ukucinga ngendlela ehambayo egazini lamadoda okwenene angakwazi ukubheja yonke into aze aphule i-jackpot.
Izindebe ngezandla zabo
Inkqubo yokufundisa imfashini: indlela yokugqoka iiparele kwaye ujonge namhlanje
Ingulube ngamakhowa kunye noshizi
Indlela yokunyamekela iinwele zakho
Ukuziphatha komntu othandana neofisi
Yintoni abafazi abanomona?